Social Media Archives - iDigital News
September 18, 2020 - Updated on November 26, 2020
August 2, 2020 - Updated on November 26, 2020
သောကြာနေ့က အမေရိကန်သမ္မတ ထရမ့်က တစ်တော့ကို အမေရိကန်မှာ ပိတ်ပင်တော့မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်မှာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်နဲ့ တစ်တော့ကြားက အရောင်းအဝယ် ပြောဆိုမှုတွေဟာ ဆိုင်းငံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက သမ္မတ ထရမ့်ရဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ့ တစ်တော့အပေါ် ချမှတ်မယ့် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ။...
June 30, 2020 - Updated on November 26, 2020
June 28, 2020 - Updated on November 26, 2020
Facebook က အချို့သော iOS user တွေအတွက် dark mode ကို ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ Social Media today ကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အသုံးပြုသူအနည်းငယ်ကိုသာ စတင်ထုတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Image...
June 21, 2020 - Updated on November 26, 2020
အခုရက်ပိုင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ FaceApp အကြောင်းနဲ့ သတိထားရမယ့် မိမိရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံမှုတွေအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ FaceApp ဟာ အခုမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ app အသစ် မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း...
Tweet Your Voice! – အသံမက်ဆေ့ကို iOS Twitter မှာ တင်လို့ ရပြီ
June 18, 2020 - Updated on November 26, 2020
နာမည်ကြီး လူမှုကွန်ယက်ဝက်ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ Twitter က iOS အတွက် အသံတင်လို့ ရမယ့် feature တစ်ခုကို စတင် မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ You can TweetaTweet. But now you...